18 MAY: Dabaal Degyo Wax Dhaafiisan Ma U Qorsheysanay Haddaynu Nahay Qurbe Joogta Somaliland
Waxaan jeclahay oo aan maanta qalinka u qaatay in aan dadkayga Somaliland ku bogaadiyo xuska munaasibada 18-ka MAY. Taas oo ah xuska sannad guurada 27aad ee ka soo wareegtay dib ula soo noqoshadii madax-bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland. Ka gadaal, hambalyada, waxaa habboon in aynu su’aalo dhawr ah is weydiino haddaynu nahay bulshada Somaliland, gaar ahaan inteena qurbaha ku nool.
Ugu horrayn, waxaa inala gudboon in aynu is waydiino, xuska munaasibadda maalinta qaranka Somaliland ee 18 MAY, ma u haynaa wax qorshe ah oo dhaafsiisan xaflado lagu qabto hoteelo uu kharash badani inagaga baxo. ma ku dhiirannaa oo ma qaban qaabinnaa sidii aynu qadiyadeena meel wal oo
sharcigu u fureyba u gaadhsiin lahayn. Ma qornaa warbixino, warar iyo taariikho tilmaamaya mudnaanta maalintani leedahay iyo halkii qaranka laga soo bilaabay yagleelkiisa iyo geedi socodka dimuquraadiyadda ka hanno qaaday, oo ay dhif iyo naadir tahay in ay ka suuro gasho dalal badan oo Afrika ah.
Si aynu kaalin mug leh uga qaadano taabbo gelinta qaddiyadda iyo madaxbannaanida qarankan curdinka ah ee Jamhuuriyadda Somaliland, inaga oo adeegsanayna warbaahinta caalamiga ah, intee in leeg ayaa la inooga baahan yahay warbixino, maqaalo iyo faalooyin ka turjumaya qarannimadeena oo aynu ku baahino Website-yada caanka ah ee caalamka, imisa warqadood baynu se u dirnaa wasaradaha arrimha dibada ee wadamada aynu ku nool nahay.
Wakiiladeena dibadu maxay qabtaan ee ay soo kordhiyaan ee xidhiidh siyaasi iyo mid diplomacy leh iyaga oo ka faaidaysanaya cududa shacbiga maalintan soo ajiibay. Haddaba ugu dambayn waxaan jeclahay inaan xasuusiyo dhamaan shacabka Somaliland gaar ahaan kuwa qurba-jooga ah in munasibadan la weyneeyo. sidoo kalena warbixino iyo qoraalo caalami ah dunida lala wadaago. Muwaadin ku dhiiri geli qof wal oo aad og tahay inuu waxna qoro waxna akhriyo inuu diyaariyo maqaal ama warbixin ku saabsan qadiyada dalkeena si aynu ula wadaagno meelaha ku haboon ee inaga gacan siin kara meel marinta qaddiyadeena, muwaadin aynu isku sheegno xidhiidhada ay haboon tahay in lala wadaago qadiyadeena.